Compendium Inotangisa Enterprise Edhiyo Karenda | Martech Zone
Compendium Inotangisa Enterprise Edhiyo Karenda
Kana iwe uri bhizimusi hombe nevanyori vazhinji, kutenderera zvese zvirimo, nguva dzakatarwa uye kusimudzira kunogona kuita kwakaoma kuita. Kuwedzera yakatanga iyo kalori wezvinyorwa nguva yakati yapfuura asi yakawedzera zvakanyanya iine mamwe mabhizimusi maficha.
Yemagariro Midhiya Kubatanidzwa - Zvese zvako zvekushambadzira zvemagariro zvino zvaratidzwa pakarenda kuti zvive nyore kuongorora uye kuronga. Kana paine ruzha rwakawandisa, unogona kungoviga izvo zvekusimudzira chero nguva.
Munyori Kuonekwa - Vese vanyori vako ikozvino vave nekwaniso kune iyo kalendari uye madingindira ezuva nezuva. Ivo havagone kuita chero shanduko kana kugadzirisa kune iyo purogiramu, asi isu tinotarisira kuti kuoneka uku kunovandudza kutaurirana kweiyo yakazara yekugadzirisa hurongwa mukati mechikwata chako.
Mazuva ese Themes - Tungamira vanyori vako uye ronga yako yekunyora nzira nekupa musoro wenyaya kana theme kune zuva rega rega. Themes dzinogona kugadzirwazve kuitika zuva nezuva, vhiki nevhiki kana pamwedzi.
Dhonza & Kudonhedza Kuronga - Tsvaga mukaha mune yako yemukati purogiramu? Dhonza positi isina kurongwa kubva padivi repaseri kuenda munzvimbo yakavhurika pakarenda yako. Iwe unogona kudzorerazve kukwidziridzwa munharaunda, zvakare.
Karenda Export & Kugovana - Makarenda ezvinyorwa zviviri uye kukwidziridzwa munharaunda anogona kuendeswa kunze uye kugoverwa kune mamwe makarenda akadai seGoogle Calendar, iCal kana Outlook Calendar. Aya maKarenda ekugovana ma URL anogona zvakare kupihwa kunevashandi pamwe nevashandi kuti vawedzere kuoneka mune zvako zvemukati zvekushambadzira mashandiro.
Kufirita & Yakagadziridzwa Dhizaini - Takaita shanduko dzakakosha mukugadzirwa kwekarenda, kusanganisira kuwedzerwa kwemamiriro ehunhu uye mafirita enetiweki. Kuwana kutarisisa kutarisisa kwepurogiramu yako yekunyora hakuna kumbove kuri nyore.
Compendium ndeyemukati mekutengesa chikuva iyo inobatsira masangano kutora uye kugadzira izvo zvepakutanga zviri mune yakashongedzwa hub yekugovera kune chero yekushambadzira chiteshi. Kuzivisa: Ndine zvikamu zvangu muCompendium, ndakashanda ipapo uye ndakabatsira kutanga kambani.